Izindlu ezincinci ezikwiNduli, eZagorje, eCroatia
Ifama sinombuki zindwendwe onguTomislav
I-Cottages on Hill ikunika amava ukusuka kwixesha likatatomkhulu nomakhulu wakho kodwa ikwatyhila ulonwabo lobomi basemaphandleni kwimeko yangoku. Unokuhlala kwindlu enkulu kunye / okanye kwiindlwana ezincinci ezazidla ngokunikwa abantu abatsha abatshatileyo.
Sinikezela ngendawo yokuhlala ekhethekileyo kwizindlu zemveli ezisanda kulungiswa kwinkulungwane ye-19. Zonke izinto zangaphakathi zihonjiswe ngemisebenzi yobugcisa kunye / okanye izinto ze-ethnographic.
Ukuba ujonge i-oasis enoxolo kwingingqi yaseZagorje Ii-Cottages eziseNdulini lolona khetho lubalaseleyo lweholide kunye nokujikeleza nosapho kunye nabahlobo. Iimeko zothando zibenza zibe yindawo efanelekileyo yezibini.
Yonwabela kwigadi yethu ethandekayo kwaye ulungiselele eyakho ibarbecue okanye ufunde ukwenza izinto ezikhethekileyo zasekhaya njengekotlovina okanye čobanac phantsi kwesikhokelo sombuki zindwendwe.
Indlu enkulu inamagumbi amabini okulala kunye negumbi elinye (lisebenza njengendawo yokuhlala ngexesha lasebusika). Kukho inkqubo esembindini yokufudumeza igesi endlwini kunye nesitovu esibaselwe ngamaplanga. Amagumbi okuhlambela amathathu ahonjiswe ngeemosaic ezenziwe ngesandla kwaye nganye ineshaware, indlu yangasese kunye nesitya sokuhlambela. Inokuqeshwa kunye nendlu enegumbi elinye iMarica engenalo igumbi lokuhlambela.
Onke amagumbi apeyintwe iindonga ezineepateni ezikhethekileyo kwaye axhotyiswe ngefanitshala yala maxesha neyemveli. Imizobo, imizobo, ubugcisa kunye nezinto zobugcisa zinika i-ambience yokuyila kwindawo.
Iindwendwe zinokulungiselela ukutya kwazo ekhitshini. Kukho umabonakude kunye nokhetho olufanelekileyo lweencwadi kwithala leencwadi lethu.
Iveranda enkulu phambi kwendlu isebenza njengegumbi lokuhlala elimangalisayo ngexesha lasehlotyeni elinendawo yokutyela okanye indawo yokudlala imidlalo yentlalo. Isenokuguqulwa ibe yi-atelier ene- sinendawo yomzobi elinde ukuba uthathe ibrashi esandleni.
Kumaxwebhu embali le lali iHižakovec ikhankanywa ngenkulungwane ye-16 ingakumbi ngokunxulumene nezidubedube zeMvukelo enkulu yaBantu baBantu ngo-1573. Inkokeli yabalimi "uKumkani uMatija" wayehlala kule lali kwaye ikamva lakhe elibi lizinze ngokunzulu kwinkumbulo yeqela laseCroatia. . Mininzi imisebenzi yobugcisa enikezelwe kulo msitho, iincwadi nemibongo, imidlalo yethiyetha kunye nefilim. Indlu encinci eyenziwe ngamaplanga yakhiwe ngabahlali ukuze bakhuthaze inkumbulo eMatija Gubec.
Iindwendwe zethu zingonwabela umkhondo, ukukhwela intaba, ibhola yepeyinti kunye neminye imisebenzi yangaphandle kwipaki yeNdalo yaseMedvednica, imizuzu eli-15 yokuqhuba usuka endlwini okanye ubhabhe phezu kweZagorje ngebhaluni yomoya oshushu.
Ukuba ungaphezulu kohlobo lwemyuziyam, ungandwendwela iMyuziyam yePeasants 'Revolt eGornja Stubica okanye iMyuziyam yaseKrapina Neanderthal. Enye yezinto ezinomtsalane zakutsha nje yimyuziyam evulekileyo eSlani Potok
I-Marija Bistrica - i-srine yesizwe yaseCroatia ikumgama oziikhilomitha ezili-14 kwaye ecaleni kolwakhiwo olunomdla ungandwendwela uninzi lwemisebenzi yemveli apho-ezimbini zidweliswe kuluhlu lwe-UNESCO lwelifa lemveli elingaphathekiyo.
Umamkeli wakho, uTomislav Horjan, ligcisa elinokukubonisa izisombululo ezininzi zokuyila kuhombiso lwangaphakathi, ngakumbi iimosaics. Isitudiyo sakhe sinokutyelelwa kwaye iindibano zocweyo zobugcisa zinokucwangciswa.
Umamkeli uqhelene nezinto ezininzi ezinomdla kwindawo ekufutshane kwaye unokunika iingcebiso ezibalaseleyo ngokomdla wakho
Umamkeli wakho, uTomislav Horjan, ligcisa elinokukubonisa izisombululo ezininzi zokuyila kuhombiso lwangaphakathi, ngakumbi iimosaics. Isitudiyo sakhe sinokutyelelwa kwaye iindiban…